तिथि मेरो पत्रु » अनलाइन डेटिङ: हित Catfished जोगिनु
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अप्रिल. 03 2020 | < 1
नोटरडैम गरेको फुटबल स्टार Manti Te'o Twitter मा आफ्नो प्रेमिका भेट्दा उहाँले पनि अर्को आउँदै थियो के संदिग्ध कहिल्यै. उनको प्रेमिका आफ्नो फुटबल मौसम को बीचमा समयमा मृत्यु, वा कम से कम उहाँले यो भनिएको थियो. वास्तविकता मा, उहाँले एक परिचित द्वारा catfished गरिएको थियो, Te'o मुटु छियाछिया र अप्ठ्यारो छोडेर. के "Catfishing" थाहै लागि हो, एक व्यक्ति अनलाइन तिनीहरूले सोझो सिकार बाहिर पैसा वा अन्य कुराहरू धुत्ने गर्न या त छैनन् कसैले हो भनेर ढोंग गर्दा यो छ. मा 2011, एफबीआई कि आसपास अनुमान $50.4 लाख योजना खुलारूपमा जोड दिंदै Catfishing ठगी मा हराएको थियो.
Catfishing ठगी आफूलाई जोगाउन पनि कसरी
Catfishing बस माथि मेल लाग्दैन कुरा हेरेर पहिचान गर्न सजिलो छ. अक्सर, एक बिरालो माछा मार्ने बस नमिल्ने कथाहरू भन्नेछु. एक नक्कली प्रोफाइल हाजिर गर्न अर्को ठूलो बाटो तिनीहरूले वास्तवमा व्यक्ति थाह भने मित्रहरुलाई सोध्नु हो (संदिग्ध बिरालो माछा मार्ने अनलाइन पनि आफ्नो मित्रहरुलाई साथी छ जब). तपाईंलाई थाहा छ कुनै एक कहिल्यै व्यक्ति भेट गर्नुभएको छ भने यो तिनीहरूले तिनीहरू हुन् भन्न जो हुनुहुन्छ भनेर सम्भवतः छ. के तपाईं जा हुनुहुन्छ जस्तो बिल्ली एक व्यक्तिको इतिहास जाँच फिर्ता र तपाईं तिनीहरूलाई कुनै पनि जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ भने बस हेर्न माछा मार्ने काम गर्थे महसुस भने यो सधैं राम्रो विचार हो.
Catfishing बारेमा थप जान्नुहोस् र क्षति यसबाट यो शैक्षिक ग्राफिक मा हुन सक्छ instantcheckmate.com.
हित Catfished इंफोग्राफिक जोगिनु